Nin 145 Shahaado Jaamacadeed ah ku hantay muddo 30 sano ah. | Radio Himilo
Home / Features / Nin 145 Shahaado Jaamacadeed ah ku hantay muddo 30 sano ah.
Nin 145 Shahaado Jaamacadeed ah ku hantay muddo 30 sano ah.
Posted by: radio himilo in Features, Wararka September 19, 2017	0 45 Views
Muqdisho – Professor VN Parthiban, oo wax ka dhiga magaalada Chennai ee dalka Hindiya wuxuu qaatay 145 degree jaamacadeed ah 30-kii sano ee lasoo dhaafay. Mana lahan qorshe uu ku joojiyo wax-barashada waqtiga nolosha uga dhiman.
Safarka tacliintiisa wuxuu ku bilowday halgan adag. Wuxuu ahaa mid aan dheehin dhugashada habboon ee wax-barashada, wuxuuna ku dhacay imtixaanno iyo mashruucyo badan. Markii uu ugu danbeyn qalin-badashay, Parthiban wuxuu shaqo ka helay Waaxda Garsoorka, hayeeshe doonistiisa la xiriirta wax-barashada marna gaagixin.
La dhacsanaanta moodaayinka qaar ee jaamacadda loogu dhigay iyo laamaha kale oo uu heli karay, Parthiban wuxuu go’aansaday inuu ku laabto Jaamacadda kana qaato degree-ga labaad. Kadibna mid saddexaad. Deedna 142 shahaado oo dheeri ah.
Sida uu ku sharraxay wareysi ay la yeelatay Sunday Indian, kadib markii uu helay degree-ga koobaad, wuxuu bilaabay inuu codsado jaamacad walba oo aan kaga baahnayn warqad beddel si uu isku diiwaan-geliyo. “Markaas waxaan hal waqti wada baranayay maadooyin kala duwan. 30-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaan joogto ugu jiray diyaarinta imtixaanaadka iyo codsashada degree ama koorso cusub,” ayuu yiri.
Tixaha ku jira Parthiban guulihiisa waxaa kamid ah, 3 Master of Science degrees, 8 Master of Law degrees, 8 Master of Commerce degrees, 9 Master of Business Administration degrees, 10 Master of Arts degrees iyo 12 degree-yo cilmi-baaris la xiriira. Mar la weydiiyay haddii ay jirto maado uusan ku raaxaysan barashadeeda, Parthiban wuxuu ku jawaabay ‘xisaabta.’
Nasiib-darro, wuxuu isku arkay dhinac taban oo kaga timid barashadiisa joogtada ah. Xifdintiisa badan waxay ku keentay in maskaxdiisu aysan helin firaaq ay ku qabato xusuusihii hore. Waxaana ku adag inuu aqoonsado wajiyada dadkii uu yiqiin iyo meelihii uu waqtiyo badan ku sugnaa.
Balse caqabadahan uma muuqdaan kuwa hoos u dhigi kara hankiisa. 56-jirkan wali wax-barasho wuxuu wali ku jiraa safarkiisa. Wuxuuna casharro ka bixiyaa jaamacado badan. Waxaa intaas dheer inuu leeyahay qoys – xaas iyo laba carruur – kuwaas oo dhammaantood si dhab ah tacliinta ugu go’an.
Xaqiiqdii, xaaskiisu waxay heysaa 9 degree jaamacadeed ah.
Previous: Hazard oo amaanay Macalin Conte.
Next: Maqaal – Jeed-jeedsiga Jeenyo iyo Jilicsanaanta Xiriirka.